Iyo Digg Mhedzisiro: Yakanaka Zvemukati + Yemagariro Networking = BIG HITS | Martech Zone
Iyo Digg Mhedzisiro: Yakanaka Zvemukati + Yemagariro Networking = BIG HITS
China, July 27, 2006 China, January 5, 2017 Douglas Karr
Pandakaitika kune vhidhiyo inonakidza ye Bill Gates naNapoleon Dynamite vhiki ino, ndakafunga kuita bvunzo diki. Ndisingazive kuti yaive yakati rebei firimu, ndakaitumira pane yangu blog uye ndokutumira iyo blog yekupinda ku Digg. Zvinoenderana newebhusaiti yavo:
Digg ndeye mushandisi inotyairwa zvemukati zvemukati webhusaiti. Ok, saka zvinorevei izvo zvazvinoreva? Zvakanaka, zvese zviri pa digg zvinotumirwa nenharaunda yevashandisi ve digg (angave iwe). Mushure mekutumira zvemukati, vamwe vashandisi ve digg vanoverenga kutumira kwako uye digg zvavanoda zvakanyanya. Kana yako nyaya ikazununguka uye ichigamuchira yakakwana diggs, inokurudzirwa kune peji rekutanga kune mamirioni evashanyi veigg kuti vaone.
Zvakanaka uye zvinotyisa. Zvemukati zvakanaka zvinokwira kumusoro… zvimwe zvinongosiya. Zvakare, pane hukama hwehukama sezvo iwe uchiona izvo shamwari dzako dzinochera uye ivo vanogona kuona izvo iwe zvaunochera. Zvakareruka uye zvakanaka. Netscape iri kushanda payo yega knockoff (munguva pfupi yapfuura hacked nevanochera). Uye imwe 'social annotation' saiti yakatangwa svondo rino, Diigo. Icho chidiki diki, asi chinokutendera iwe kuti usiye zvinonamira zvinyorwa pamasaiti izvo shamwari dzako dzinogona kuverenga kana vari mitezo yaDiigo futi.
Chero zvawakaita… ndakawedzera iyo digg yekupinda Svondo manheru NeMuvhuro mangwanani, saiti yangu yakanga yabvaruka, ichipepetwa uye ichifa nekuda kwehuwandu hwekurova munguva pfupi. (Saiti yacho yanga iriyakanaka, mainjiniya angu anondiudza kuti WordPress inogona kubata zvishoma pasi pevhoriyamu). Heano mamwe matanho:
Ichangopfuura kupinda kubva kuna Seth Godin akafanotaura mukurumbira uchikura 'kumeso kumeso' vhidhiyo yemunhu ichirova mambure. Anoti hazvisi zvemakambani zvakanyanya nezve vanhu. Asi vanhu MAMAKambani, handizvo here? Ini ndakaisa yevhisi inosekesa vhidhiyo yaBill Gates kumusoro kune yangu saiti uye yangu vhoriyamu yakakura husiku nehusiku kupfuura 1000%. Saka - pamwe ndezve vanhu ... vanhu vari kumashure kwekambani.
Chero nzira, izvi zvinonongedza kune simba rekushamwaridzana, pamwe nekumhanya kwenzvimbo dzekudyidzana pamambure. Zvichida isu tinogona kuitumidza iyo 'Digg' maitiro Zviripachena, kana iwe ukatarisa manhamba, pasocial network yemambure ine simba uye haifanire kufuratirwa. Ini ndichangobva kuburitsa blog yangu kune vanopfuura vanhu 2,500 48 mumaawa makumi mana nemasere! Yangu Feed stats yakakwira 2000% mumaawa makumi mana nemasere. Izvi zvinokurudzira. Zvinoreva kuti vaverengi vakatarisa pamusoro peiyo goofy vhidhiyo uye vari kutora kufarira mune zvangu zvemukati.
Mubvunzo ndewokuti ndinogona kuzvichengeta here?
Nekutenda, ini handifunge kuti Digg inogona kukanganiswa nevashambadzi vakaipa. Mushure mezvose, ivo 'vanochera' vanosarudza izvo zvinogadzira uye izvo zvisingaite. Saiye mushambadzi, zvakadaro, ini ndinogona kuda kuisa imwe nguva nezviwanikwa mune zvimwe zvinonakidza zvemukati izvo zvichave 'zvakacherwa' uye zvichaburitsa iro izwi pane yangu brand kana chigadzirwa.
Tags: diggdigg mhedzisiro
Godin: Intuition vs Kuongorora
Nyeredzi yeIndipolis Yakaferefetwa mushure mekufa kweMutori wenhau Mpozi Tolbert
Sep 21, 2006 na5: 11 PM
Ndiri kuona Digg ichichinja munzira dzakasarudzika uye ichinyatso kugadzira nzira yekubatana mukugadzira (uye kugadzirisa) kuyerera kwenhau, mune chero fomati iri. Vanhu vazhinji vanozviona seimwe nzvimbo kumwe kudyara zvimwe zvakachipa zvinongedzo. Iko vanhu varikunyatso kubatanidzwa irwo rwezvemagariro divi iwe iwe rwakatsanangurwa mune yako post.
Rudzi rwekuzviona se mega-blog.
Sep 22, 2006 pa 10: 33 AM
Ndatenda nekutaura. Hongu, ndinofunga wakarurama. Ndinovimba Digg inokoshesa pamasocial mamiriro asi. Chiyero chemakomendi chinhu chinotonhorera ... chinofanira kuve chinonyanya kuratidzwa, hazvo. Shamwari maDiggs anotonhorera, asi kushandiswa mukufamba kuenda kune rakasiyana tag kunoita kuti irege kuve nemukurumbira. Kune chigodhi chegoridhe imomo kumwe kunhu.
Ini ndinozviwanawo ndavhiringidzika kuti ndosarudza sei chikamu. Maonero angu ega pane izvi ndeekuti kudzora zvikamu zvavo kunovakuvadza. Ndingadai ndoda kuona vashandisi vachikwanisa kuronga nematagi pane zvikamu. Ipapo, semuenzaniso, ini ndaigona kutsvaga "CSS Fade" uye ndikauya nerondedzero yezvinyorwa zvakacherwa nezvenyaya iyoyo.
Digg inowanzo kuve neyakaipisisa ichiyangarara kumusoro uye ivo vasati vatora mari pazvinhu zveB2B zveblogosphere. Ko kana iwe uchikwanisa Digg zvinyorwa wozvimaka ne "CRM Software"… fungidzira mhinduro!
Sep 22, 2006 na2: 23 PM
Hits dzangu dzakasvetuka futi, nenhamba yakanaka kwazvo nekuda kweangu apfuura maDiggs.